समय अगावै कपाल किन फुल्छ ? बच्ने कसरी ? – Complete Nepali News Portal
July 27, 2017	709 Views
काठमाडौं । लामो, कालो, घना र बलियो कपाल पाल्ने इच्छा सबैले राख्छन् । यस्तो कपालप्रति धेरैजना आकर्षित हुन्छन् र शरीरको सुन्दरता पनि बढ्छ ।
शरीरमा भएको थाइरोइड ग्रन्थिबाट निस्कने हर्मोन कम मात्रामा बन्दा पनि कपाल सेतो हुने सम्भावना बढ्छ । सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको अत्यधिक प्रयोग, प्रदूषण, नशालु पदार्थको सेवन, कडा पानी र तनाव पनि कपाल छिट्टो फुलाउने साधन हुन् । लोकान्तरबाट